#Hogaamiyaha Puntland oo maanta u safray dalka China - Get Latest News From Horn of Africa
#Hogaamiyaha Puntland oo maanta u safray dalka China
Wafdiga Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni ayaa maanta oo Axad ah ka dhoofay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Garoowe. Ujeedka safarka Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ah in uu la kulmo madax katirsan Dowladda Shiinaha oo uu casumaad ka helay.
Waxyaabaha uu kala hadlayo waxaa kamid ah, in Xukuumadda Beijing ay ka taageerto Mashaariic lagu hormarinayo dhaqaalaha Puntland iyo maalgashi ay ku sameystaan ganacsatada dalkaasi.
Waa safarkii labadaad oo Madaxweyne Deni ku tago dalka dibadiisa tan iyo markii uu noqday Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland oo uu ku guuleystay doorasho ka dhacday 8-dii Janaayo sanadkaan 2019-ka.
Horay waxa uu u tagay Dalka Isugu tagga Imaataarka Carabta oo uu kula kulmay Madaxda Dalkaasi. Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa daba-jooga ballanqaadyadii Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ay u sameeyeen qaar kamid ah dalal uu horay u tagay.
Socdaalkiisa Shiinaha waxaa ka horeeyay, safaro dhulka ah oo uu ku tagay Deegaanada Maamulka Puntland, waxaana saacadihii lasoo dhaafay uu isbadal ku sameeyay Maamulka Gobolka Mudug dhanka waqooyi ee hoostaga Dowlad Goboleedka Puntland